Att söka vård - somaliska
Doonasho daryeel caafimaad
Att söka vård - somaliskaThe content concerns Västra Götaland
1177 Hagidda daryeelka caafimaad ee internet-ka
Bogga internet-ka 1177.se waxa ku jira kumanaan qoraal ee cudurada, baaritaano iyo daaweyn. Waxa kaloo ku jira filimo, tusaale sawiro iyo islaaytshoow. Waxa kalood halkan ka heleysaa qeyb qaasa ee caruurta.
Rugta daryeelka caafimaad
Rugta daryeelka caafimaad ayaa asaasi u ah daryeelka caafimaad ee iswiidhen. Halkan ayaa ah meesha ugu horeysa ee aad tegeyso haddii aad adiga ama ilmahaagu u baahataan daryeel caafimaad. Rugo badan ee caafimaad ayaa leh talo siin telefoon. Waxey kaloo badanaa kuu heli karaan waqti booqasho deg dega haddii xiligu yahay maalin shaqo.
Rugta daryeelka caafimaad ayaa lagugu baari karaa kadibna aad ka heli kartaa daaweyn cudurada iyo dhibaatooyinka badankooda. Waxey kalooy ka shaqeysaa rugtu ka hor tagga cudurada iyo bixinta talooyinka caafimaad. Shaqaalaha rugta ayaa xataa kaa caawin kara haddii aad qabto dhibaato ruuxa ah, tusaale ahaan haddii aad niyad xun tahay ama qabto wel wel una baahan tahay qof aad la hadasho. Haddii aad u baahan tahay daryeel caafimaad ama baaritaan cisbitaal, dhaqtarka ayaa kuu qoraya codsi si waqti laguu siiyo cisbitaalka ah. Waxa kaloo codsi laguugu diri karaa dhaqtarka ruuxiga.
Rugaha daryeelka caafimaad ayaa badanaa furan saacadaha maalmaha shaqada inta u dhaxeysa 08.00-17.00. Haddii aad u baahan tahay daryeel caafimaad xiliga ay xiran yihiin rugaha caafimaad waxaad la xiriiri kartaa xarumaha heeganka.
Helidda rugtaada caafimaad
Doorashada rug caafimaad
1177 Hagidda daryeelka caafimaad ee telefoon
1177 ayaa ah lambarka telefoon ee tala siinta daryeelka caafimaad. Wuxuu lambarku ka shaqeynayaa dalka oo dhan, dhamaan maalmaha sanadka iyo afar iyo labaatanka saaca. Waxad wici kartaa lambarkaa haddii aad u baahan tahay inaad la hadasho kalkaaliso caafimaad:
si aad u hesho talo is daweyn,
waxa ku saabsan calaamadaha cudur,
haddii aad u baahan tahay inaad raadsato daryeel caafimaad,
meesha aad daryeelka ka raadsan karto,
sida ay arintaadu deg deg u tahay.
Xaaladaha deg dega ee qatarta u ah nolosha waxa lala xiriirayaa lambarka imirjensiga 112 ee ka shaqeeya dalkoo dhan.
Wax intaa dheer ee ku saabsan 1177 hagidda daryeelka caafimaa ee telefoon
Tala siinta daryeelka caafimaad ee turjubaan af-carabi iyo af-soomaali
Waxa tala siinta daryeelka caafimaad lagu heli karaa iyadoo la isticmaalayo turjubaan ku hadla afafka carabiga iyo soomaaliga. Adeeggaa ayaa furan dhamaan maalmaha oo dhan inta u dhaxeysa 08.00-22.00 iyadoo lacagta telefoonkuna tahay sida tan caadiga. Tala siinta waxa bixinaya kalkaaliso caafimaad caadi ah ee 1177 hagidda daryeelka caafimaad ee Galbeedka gobalka Götalandsregionen oo isticmaalaya turjubaan.
Af-carabiga wac 0771-11 77 90.
Af-soomaaliga wac 0771-11 77 91.
Aqriso wax intaa dheer
Halkan ayaad tegi kartaa haddii aad u baahato talo dawooyinka ka hortaga uurka iyo baaritaanka tijaabada unuga ee qeybta dumarka. Qaabilaadda ayaad joogto ula shaqeysa daryeelka dhalitaanka iyo rugta daryeelka caafimaadka caruurta. Halkan waxad kalood ka heli kartaa caawimaad ku saabsan haddii shaki kaaga jiro inaad qaadan cudurada galmadu keenot.
Qaabilaadda ayaa heysata umuliso, dhaqtar, dhaqtar cilmu-nafsi iyo aqoon yahay cuntada.
Haddii aad uur leedahay waxad heleysaa daryeelka caafimaad ee hooyada oo qeyb ka ah qaabilaadda umulisada.
Daryeelka caafimaad ee hooyada
Daryeelka caafimaad ee hooyada ayaa ah qeyb ka mida qaabilaadda umulisada. Waxa loogu yeeri karaa xarunta daryeelka hooyada, MVC. Waxa loogu tala galay qofka uurka leh. Daryeelka caafimaad ee hooyada waxa ka shaqeeya umulisooyin. Waxey wax ka caawiyaan daryeelka caafimaad iyo baaritaanada xiliga uurka, talo siinta ku saabsan dawooyinka ka hor tagga uurka iyo qaadidda tijaabadda unug ee qeybta dumarka. Waxay kalooy kaa baari karaan cuduro kala duwan ee galmada laga qaado.
Dumarka oo dhan ee sugaya caruurta waxey xaq u leeyihiin daryeel caafimaad hooyo ee lacag la'aan ah.
Rugta daryeelka caafimaadka caruurta, BVC
Rugta daryeelka caafimaadka caruurta, BVC, waxa loogu tala galay caruurta u dhaxeysa 0 ilaa iyo 6 sano. BVC ayaa sameysa baaritaanada caruurta dhalatay iyo kuwa da'a yar caafimaadkooda, iyo talo siinta waxyaabaha ku saabsan horumark caruurta. Shaqaalaha ayaa kugu soo booqan kara guriga marka ilmo la korsanayo mar dhow reerka u yimaadaan ama marka ilmo ay mar dhow u soo guuraan.
BVC ayaa wada shaqeyn dhow la leh qaabilaadda umulisada, rugaha caafimaad iyo qaabilaadaha caafimaad ee caruurta iyo dhalinyarada. Lacag ma bixineysid markaad booqaneyso BVC.
Baaritaanada rugaha daryeelka caafimaad ee caruurta
Xarunta heeganka ayaa waxa loogu yeeraa daryeelka koowaad ee deg deg ama deg dega dhow. Waxad halkaa tegi kartaa adigoon balan laheyn, balse waxa wanaagsan inaad horey u sii wacdo. Xarunta heeganka waxa la tagaa marka rugta daryeelka caafimaad ay xiran tahay isla markaana qofku qabo cudur deg dega iyo dhibaato aan sugi karin maalinta ku xigta.
Haddii loo baahdo waxa laguu sii diri karaa qaabilaadda deg dega. Xarunta heeganka ayaa dhameystirta rugaha caafimaad iyo cisbitaalka arimaha deg dega. Waxa loogu tala galay wax qabadka yar yar. Baaritaano waaweyn laguma sameeyo halkan.
Helitaanka xarunta heeganka
Daryeel deg dega
Shilalka aadka u daran, cudurada qatarta ah ama haddii aad u baahato ambalaas waa inaad wacdaa 112. kalkaaliye caafimaad ee ambalaasta ayaa go'aan ka gaaraya inaad cisbitaal u baahan tahay iyo in kale. Haddii loo baahdo dhaqtar meesha ayaa looga yeeri karaa.
Waxa xarunta deg dega la tegi karaa marka tusaale ahaan qofku isku arko xanuun weyn ee bogga, dhibaato neefta ah, dhaawac madaxa, madax xanuun weyn ee deg dega, xanuun daran ee caloosha, muruq kogid, laf jabid, nabar dilaaca ee qoto dheer, dhiig bax weyn, suuxid iyo xanuun daran.
Bukaan socodka ayaan mar kasta helin baaritaan cudur ee xarunta deg dega. Waxa kaliyoo loo daaweeyaa si loogu wareejiyo qeyb kale ee daryeel takhasus ama baaritaan.
Helitaanka xarunta deg dega